Alfa 2022 mishiinada tolida: isbarbardhigga, soo jeedinta, ra'yi iyo in ka badan!
Maalinta Maalinta 2022
ka Mashiinada dharka lagu tolo Waxay ku dhasheen Basque Country. Shaki la'aan, waxay ka mid yihiin kuwa loogu yeero mishiinnada nolosha. Guryo badan, waxaa hubaal ah in ay weli jiraan noocyadoodii caadiga ahaa. Waxaan tixraacaynaa kuwa lahaa baallaha laakiin u baahnaa xoogga aadanaha si ay u bilaabaan. Wax badan ayaa isbedelay ilaa maanta, gaar ahaan xagga raaxada iyo casriga.
Tayadu waa shay si heersare ah u soo gaadhay ilaa wakhti hore. Marka aan ka hadalno mashiinnada dharka Alfa, waxaan ognahay inaan ku jirno gacmo wanaagsan. Ku xisaabtan oogada tolida weyn, muuqalka iyo sidoo kale awood nooc kasta oo dhar ah iyo fursado badan oo badan oo aad maanta ka heli doonto dhammaan moodooyinka. Dooro midda ku habboon shaqada aad qabanayso!
Mashiinnada dharka lagu tolo ee Alfa
-31 nooc oo tolmo ah
-Dharka tol: 4,5mm
-Buttonhole: Si toos ah 4 tallaabo
-Awoodda 70w 209,00 €
-21 nooc oo tolmo ah
-Dharka tol: 4mm
-Buttonhole: 4 tallaabo oo toos ah
-Awoodda 70W 177,10 €
Eeg bixintaFiiro gaar ah: 9/10
-25 nooc oo tolmo ah
-Buttonhole: 4 tallaabo
-Awoodda 70W 232,99 €
720 aasaasiga ah
-9 nooc oo tolmo ah
-1 badhan godka 4 tillaabo
-Awoodda 70W 139,00 €
Eeg bixintaXusuusin: 10/10
-34 nooc oo tolmo ah
-Automatic 4 tillaabo
-Awoodda 70w 212,00 €
Sida aad arki karto, the mashiinka dharka lagu tolo Alfa Style 40 iyo Stile Up 40 Waxay leeyihiin astaamo isku mid ah. Awoodda, lixda saf ee ilko quudinta iyo fududaynta maaraynta labaduba waa arrimo caadi ah.
Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin waa nooca tolmada iyo godka badhanka. Inta soo hartay, waxaad heli doontaa tolmo la isku qurxiyo iyo kuwa aasaasiga ah oo leh labada mashiin, oo ay ku jiraan festoons ama zigzag. Labada Mashiin 20 Xiga iyo Aasaaska 720 ama Compakt 100 labaduba waxay ku kala duwan yihiin tolmo.
Doorashadaadu waxay had iyo jeer ku xirnaan doontaa isticmaalka aad siiso. Haddii ay tahay waxyaabo aad u aasaasi ah sida cirifka, mashiinnada ugu fudud ayaa noqon doona kuwo qumman, sida Xiga 20. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah waxay kaa caawin doonaan hawlahaaga adigoon wax badan bixin, inkastoo ay kaa caawinayaan doorashada, hoos waxaan u soconaa kuu sheeg sifooyinka ugu muhiimsan ee mid kasta oo ka mid ah moodooyinka mashiinnada tolida Alfa ee makaanikada taas oo aynu ku soo aragnay shaxda sare.
Habka 40 Mashiinka
Mashiin Alfa Style 40 waa mashiinka tolida oo awood badan. In ka badan wax kasta sababtoo ah meesha ugu horeysa waxaan horay uga hadalnay 70 W oo si fiican loo isticmaalo. Waxay leedahay lix saf oo ilko quudin ah iyo sidoo kale 31 nooc oo tol ah dhammaan shaqooyinkaas aad ka fekereyso. Waa in la sheegaa inay aad u xasilloon tahay, sidaas darteed waxaad ku macsalaamayn doontaa nooc kasta oo rux ah.
qiimihiisu waa ku dhawaad ​​170 yuuro waadna awoodaa halkan ka iibso
ALFA Xiga 30+ Guga...
Inkastoo mashiinka tolida Alpha Xiga 30, sidoo kale waxay leedahay awood 70 W iyo lix saf oo ilko quudin ah, kiiskan waa in la xuso inaad haysatid wadar ahaan 21 tol oo aad gacanta ku hayso. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay daawaha tolmada dhabarka ee LED.
Thanks to this iftiin cad indhuhu ma daali doonaan, marka ay tahay inaad waqti badan la qaadato iyada. Muuqaal weyn oo loogu talagalay shaqadaada iyo dabcan, raaxada iyo aamusnaanta ayaa ah waxa mashiinka noocaan ah uu ku siinayo.
Haddii aad xiisaynayso mishiinkan, waxa ay noqon kartaa kaaga ilaa 200 oo Yuuro oo aad awoodid halkan ka iibso
Xaaladdan oo kale, waxaan ka heli a mashiinka tolida qumman ee bilowga kasta. Laakin waa inaadan kaligaa ku joogin fikradan. Inkasta oo ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fudud, si ay u bilaabaan adduunka tolida, waxay sidoo kale bixisaa xulashada tayada kuwaas oo ku haboon kuwa wax tolaya in muddo ah.
Xaaladdan oo kale, waxaad yeelan doontaa 25 nooc oo tolmo ah oo lagu daray festoon. Dhererka laba jibbaaran ee cagaha riixaha, kaas oo ku habboon inuu ku shaqeeyo maro yar oo dhumuc weyn leh. Matoorku sidoo kale waa 70W wuxuuna leeyahay cudud la saari karo oo dalool leh, halkaas oo aad ku kaydin karto qalabka qaarkood ee mashiinkan.
Iyada oo qiimihiisu yahay kaliya 120 euro, mashiinka dharka ee Alfa Next 40 waa mid ka mid ah kuwa ugu soo jiidashada badan oo kara halkan ku noqo.
Alpha Basic 720
ALFA 720+ riixaya...
Haddii aad weli rabto wax aad u jaban, labadaba qiimaha iyo waxqabadka, markaa waxaad raaci kartaa Alpha Basic 720. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadleynaa xaqiiqda ah in ay ku haboon tahay in lagu bilaabo iyo wadar ahaan 9 tolmo oo kala duwan, waxay nagu xaddideysaa marka ay timaado barashada wax yar. Laakiin haddii aad u rabto kaliya hagaajin gaar ah, markaa waxay noqon doontaa mashiinkaaga ugu fiican.
Waxay leedahay natiijo wanaagsan, fududahay in la isticmaalo iyo qiimo lacageed oo ka badan mid cajiib ah maadaama ay ku kacayso kaliya 119 euro. Halkan ka iibso.
Mashiinka Tolidda Alfa...
Sida magaca ka muuqata, waa wax yar oo cufan marka loo eego noocyada kale ee astaanta. Waa mashiinka tolida oo ku habboon inuu ku raaco meel kasta oo aad tagto. Waxay leedahay 34 naqshadood oo tol ah, iyo sidoo kale afar-tallaabo oo toos ah badhanka.
Ballaca iyo dhererka tolku waa la dejiyay. Ma iloobin inay sidoo kale leedahay dherer labanlaab ah oo cagaha riixaya ee dharka dhumuc weyn. Dhakhso, fudud oo iftiin leh… maxaa dheeraad ah oo aan codsan karnaa?
Waxaas oo dhan iyo wax ka badan oo kaliya 162 euro. Haddii aad xiisaynayso, waad awoodaa halkan ka iibso
Mashiinnada tolida ee Alfa Electronic
Alpha Smart Plus
-hal-tallaabo otomaatig ah godad
-Muujin, iftiin cad, calaamado, xarfo 599,00 €
-Dharka tol: 5mm
-7 nooc oo botonholes
-Winder otomaatig ah, shaashad 649,00 €
-Noocyada tolida: 120
-7 godad badhan oo toos ah
-Iftiin, wiish si toos ah 809,00 €
-Noocyada tolida: 404
- Hal tallaabo oo batoon ah oo toos ah
-Tolmo xusuusta leh, 2 xaraf oo calaamado leh 526,00 €
Eeg bixintaXusuusin: 6 / 10
Alfa Smart Plus-Mashiinka...
Xaaladdan oo kale, gudaha Alfa mashiinada dharka elektarooniga ahWaxaan helnaa nooc qumman oo la maarayn karo. Waxaa meesha ka baxay mashiinadii ballaadhnaa ee aad uga dhib badnaa. Miisaankiisu waa 6,5 kg.
Dhererka tolida, oo had iyo jeer ah mid ka mid ah qodobbada aasaasiga ah ee lagu xisaabtamayo, waa 4mm doorsoome. Halka ballaciisu yahay ilaa 5mm. Waxay leedahay a Shaashadda LCD si aad u awooddo inaad sameyso barnaamijkaaga. Haddii aad la yaabban tahay waxa ay yihiin noocyada tolmada, waa inaan kuu sheegnaa inay jiraan wadar ahaan 100 kuwaas oo ay tahay in lagu daro calaamado iyo xarfo kale. Qaar ka mid ah iyaga ka mid ah waa cirif, ururin, balastar ama tolmo isdhaaf ah, iyo kuwo kale.
qiimihiisu waa ku dhawaad ​​€550 iyo halkan waad ka iibsan kartaa
Qaabka Alfa 2160 mishiinka tolida waa duni kale. Waxaan dhihi karnaa kiiskan waxaan yeelan doonaa wadar ahaan 60 nooc oo tol ah.
shaki la'aan mar hore Waxaan galnay wax ka badan garoon xirfadeed. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay 7 nooc oo badhanno toos ah. Si la mid ah sida dunta oo waliba tayadan leh.
Dhererka tolku wuxuu gaaraa 5 mm, halka ballaca tolku uu gaaro 7 mm. Waxa kale oo ay leedahay shaashadda LCD.
Qiimaheedu waa qiyaastii 518 euro. waad awoodaa iibsato
Alfa Model 2190-Mashiinka...
Dabcan, haddii aan ka hadalno xirfad-yaqaannimada, markaa tani waa midda qaadata kaalinta labaad. Wadarta guud 190 naqshadood oo tolmo ah.
Balackeedu kama duwana kii hore ee ku hadhay 7 mm iyo dhererka, sidoo kale 5 mm. Waxay leedahay wadar ahaan 7 godad badhan oo toos ah.
Waxay noqon kartaa habee xawaaraha oo waxay leedahay dherer laba jibaaran oo cagta ah. Tan waxaa loogu talagalay marka ay tahay inaad tosho dhar dhumuc weyn leh.
Qiimaheedu waa ku dhawaad ​​800 oo Yuuro. Haddii aad xiisaynayso, waad awoodaa ka soo iibso isku xirka aan hadda kaa tagnay.
Markii hore, waxaan la joognay mid kale oo ka mid ah mishiinnada dharka ee Alfa elegtarooniga ah.
Xaaladdan oo kale, Zart 01 wuxuu lahaan doonaa 404 nooc oo tolmo ah. Intaa waxaa dheer, oo leh xusuusta si aad u awooddo inaad badbaadiso kuwa aad ugu badan tahay. Waxa kale oo ay leedahay laba alifbeeto leh calaamado iyo dalool toos ah oo hal-tallaabo ah. Ballaca tolku wuxuu ahaanayaa 7mm, dhererkiisuna wuxuu ahaan doonaa 4,5mm.
Waxaad hagaajin kartaa xawaaraha oo aad hagaajin kartaa cadaadiska cagta riixaha.
Waxaas oo dhan qiimo ku dhow 555 euro. Haddii aad rabto waad awoodaa halkan ka iibso.
Waa maxay mashiinka dharka ee Alfa loo isticmaalo Masters-ka Tolida?
Alfa 2190 mishiinka tolida
Waa mid ka mid ah mishiinnada sida aadka ah looga arki karo barnaamijka Tolida Masters. Malaha sababtoo ah waa mid ka mid ah moodooyinka ugu dhameystiran, oo leh 190 naqshadood iyo wiish si toos ah.
Sidoo kale waxa aynu ka helaynaa 7 nooc oo godad badhan oo toos ah iyo shaashad LCD ah halkaas oo aan si dhakhso ah oo fudud u arki karno dhammaan xulashooyinka. Laakiin iyada oo aan la iloobin in ay tahay mashiinka ugu fiican ee dharka qaro weyn.
Alpha 8707 overlocker
Xirfadlaha Alpha 8707
Xaaladdan oo kale, waxaa sidoo kale jira daboolayaasha laakiin midna maaha, laakiin wuxuu ka yimid gacanta Alfa. Mashiinnada noocan oo kale ah waxay soo bandhigaan waxyaabo cusub oo cusub, maadaama ay sidoo kale ku toli karaan dhar labajibbaaran oo ay uga mahadcelinayaan daabyada ay haystaan, waxay sidoo kale gooyn karaan dharka xad-dhaafka ah ee tolidayada. Sidaa darteed ka hortagga dharka si ay u jajabaan, sidaas darteed dhamaadka waa mid aad u xirfad badan.
Intaa waxaa dheer, faa'iidooyinka faa'iidooyinkan waxaa ka mid ah xaqiiqda ah in aan waqti ku badbaadin doono shaqo kasta. Waxaad dhigi kartaa afar xabbo oo dunta aad jeceshahay waxayna sidoo kale leedahay kabaal si aad u wanaagsan u dunto.
Tusmada ugu hooseysa ee 8703
Xakamaynta Alpha 8703
Waa mid kale oo ka mid ah moodooyinka Alpha oo aan sidoo kale ka arki karno barnaamijka telefishanka. Xaaladdan oo kale waxaan wajahaynaa mid kale oo ka mid ah lagu daydo xirfad badan. Taas oo noo sheegaysa in dhammaynta ay sidoo kale noqon doonto mid aad u sax ah. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad si fudud u dejiso xiisadaha, duntu waxay sidoo kale ka fududaan doontaa sidii la filayay.
Iyadoo aan la iloobin in ay leedahay kontaroolada hagaajinta labadaba ballaca iyo cirifka iyo iftiinka LED.
Mashiinka tolida Alfa oo aan baallaha lahayn
Mararka qaarkood waxaan helnaa wax ka badan qalab aasaasi ah. Haddii aad rabto inaad wax walba maamusho laakiin ka tag gacmahaaga xorta ah, markaa baallaha ayaa noqon doona doorashadaada ugu fiican. Dabcan, xaaladaha kale, mishiinka tolida uma baahna adigana. In ka badan wax kasta sababtoo ah Thanks to shaashadaha LED-ka ee aan horay u soo sheegnay, waxaan xakameyn karnaa wax kasta oo halkaas ka yimaada.
Waa run in si ay u noqoto doorasho shakhsiyeed, waxaa jira moodallo badan oo leh pedal. Laakiin run ahaantii hawlgalka mishiinku wuxuu noqon karaa mid la'aan ama la'aanteed. Sida aad arki karto, waxaad haysataa ikhtiyaarka shaashadda laakiin moodooyinka kale waxay sidoo kale yeelan doonaan badhamada iyo giraangiraha. Waxaas oo dhan waa mid aad u fudud in la isticmaalo xitaa kuwa bilaabay farshaxankan.
Mashiinka tolida dunta Alfa
Ka hor dunta mishiinka tolida alfa Waa inaad raacdaa diyaargarow taxane ah oo aad ka arki karto muuqaalkan soo socda:
Markii aanu diyaarinay diyaar garow. Waxaan u sii socon karnaa dunta. Waa kan fiidiyoo kale si hab-socodku uga dhigo mid tusaale iyo waxtar badan leh:
Had iyo jeer waa mid ka mid ah waqtiyada ugu adag. Ama taasi waa waxa aan u maleyneyno, sababtoo ah maalmahan wax badan ma sii ahaan doono. Mashiinka tolida ee Alfa oo lagu dunto Waxay noqon kartaa ciyaar caruureed. Qaar ka mid ah moodooyinka, sida Alfa Xiga 30 ama 40, waxay leeyihiin nooc ka mid ah sawirada qaabka fallaadha ee sare. Sidan, waxaan ku ogaan doonaa tallaabooyinka la raacayo.
Waxaan dhigeynaa xirmo dun ah xagga sare oo bidix u jiid. Waxaan arki doonaa nooc ka mid ah jillaab kaas oo aan dhex mari doono.
Waxaan si toos ah hoos ugu qaadnaa. Waxaan u gudbin doonaa gadaashiisa aagga midabka, midigta halka ay ka soo baxaan lambarka 2 iyo fallaadho cusub oo kor ah.
Dulku kor ayuu u kacayaa ilaa uu ka gaadho lambarka 3. Waxaad ka dhex jiidi doontaa jillaabkiisa oo aad dib ugu noqon doontaa lambarka ku xiga.
Waxaa jira dhig dunta dhererka cirbadda si loo dhameeyo dunta.
Daboolka mashiinka dharka lagu tolo ee Alfa
Markaad safar gasho ama aad u baahan tahay inaad ka qaadato meel aad meel kale ka qaadato, markaa waxaad sidoo kale u baahan doontaa Daboolka mashiinka dharka lagu tolo ee Alfa. Sababtoo ah haddii aadan haysan, waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa boggooda internetka, qiimo dhan 40 euro. Waxay mashiinkaaga ka ilaalin doontaa wasakh iyo kuuskuusan labadaba.
Waxay leedahay xoojinta gudaha, iyo sidoo kale gacanta ergonomic. Ma la kulmi doontid dhibaato meel bannaan sababtoo ah waxay kaloo leedahay meel la dhex-dhisay jeebka lagu kaydiyo agabka ugu weyn. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale ku yimaadaan midabyo waaweyn sida buluug ama aubergine. Qaar ka mid ah moodooyinka, sida Alfa Zart01, ayaa mar hore la yimid marka la iibsanayo mashiinka.
qiimihiisu waa ku dhawaad ​​36 yuuro waadna awoodaa halkan ka iibso.
Qaabka Alpha Style ee Adiga
Inkastoo tan nooca mishiinada Qalabka qaarkood sida cirbadaha ama bobbins ayaa mar hore lagu daray, waa run in mustaqbalka fog, laga yaabo inaan u baahanahay qaar ka mid ah. Hagaag, kama welweli doontid. Waxaad ka heli kartaa dukaanka rasmiga ah ama dukaamo badan oo muuqaal ah iyo online. Tani waa sababta oo ah waxay badanaa la shaqeeyaan nooc ka mid ah qalabka aasaasiga ah ee sahlan in la helo. Dukaan kasta oo leh mashiinada Alfa waxay sidoo kale yeelan doonaan qalabkooda dheeriga ah, laakiin haddii aad rabto, waad awoodaa online ka iibso linkiga aan hadda kaa tagnay.
Buug-gacmeedka mashiinka tolida Alpha
Haddi aan horeba u naqaanay sida loo maamulo mishiinada harqaanka ee Alfa, waxa laga yaabaa in aanu dhinac iska dhigno buug-gacmeedyada. Waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso iyaga, sababtoo ah mar walba waxaa jira faahfaahino kala duwan. Sidan, waxaad si fiican uga faa'iidaysan doontaa tayada mashiinkaaga cusub. Haddii aad hadda ka bilaabayso iyaga, markaa way fiican tahay inaad had iyo jeer gacanta ku hayso tilmaamaha asalka ah.
Haddii aad haysato mashiinka dharka ee Alfa, halkan waad awoodaa gal buug-gacmeedyadaada.
Taariikhda mashiinnada dharka Alfa
Kaas oo aan guriga ku haysan ama yaqaan qof haysta midkood mashiinnada alfa? Waa hagaag, kuwani waxay leeyihiin taariikh dheer, taasna, waa inaan dib ugu laabanaa 1920. Marka lagu daro muhiimada sanadkan, sababtoo ah waa dhalashadiisa, Éibar maaha wax ka yar. Magaalo ku taal Basque Country oo arkay dhalashada shirkadda oo sii jiri doonta waqti dheer ka dib.
Markii hore, shirkadda loo yaqaan Alpha wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo hubkaWaagaas waxaynu ka hadlaynaa 1892. Kani wuxuu ahaa wax-soo-saarkoodii ugu weynaa, laakiin waxaad mooddaa in aanay ka tegin lacag ku filan oo ay hore ugu socon karaan. Waxaa intaa dheer in dhowr xasarado iyo shaqo joojin ay isugu yimaadeen taasoo keentay in ganacsigii dib loo eego. Waqtigu wuu isbedelay waxayna go'aansadeen inay sharad ku galaan mishiinnada dharka. Fikrad macquul ah oo in yar oo yar qaadatay koorsadeeda oo bilaabay inay midho dhaliso. Dunidii tolida ayaa aad u soo koraysay, markaa had iyo jeer caawimada waa la soo dhawayn jiray.
Laga soo bilaabo sannadkii 1922-kii shatiyada ayaa hore u soo muuqday oo iyaga calaamad u ah Alfa. Laakiin waa run in aanay ahayn ilaa 1925 markii fikradihii ugu horreeyay ee mashiinka dharka lagu tolo ay soo baxeen. Hubaal fikrad Waxay ahayd markii ugu horeysay ee Spain iyo in iyada la, kacday qaybta. Waxay ahayd 1927 markii ku dhawaad ​​175 unug oo badeecadan ah la soo saaray sanadkii. Sannad ka dib, hawshu si aad ah ayaa loo sii dardargeliyay sababtoo ah amar weyn ayaa la saaray, si loogu soo bandhigo mashiinnada dharka ee dugsiyada.
Sababtoo ah Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka Waxa kale oo ay leedahay nasasho weyn oo ku saabsan wax soo saarkeeda, ilaa laga soo badbaadiyay 40s. Iyadoo wakhtigu sii socdo, waxay ku soo noqotay booska lafteeda 50-meeyadii iyada oo tixraac weyn u ah wax soo saarka, inkastoo xaqiiqda ah in magacyo kale oo muhiim ah ay sidoo kale ahaayeen. oo horeba ula macaamilay dhulka. Inta ay sii korodhay, waxay sidoo kale samaysay waxqabadyo kale oo dheeraad ah oo ah qaabka adeegyada bulshada ee dhammaan shaqaalaheeda. Taariikh dheer oo ay mar kale saamaysay qalalaase weyn oo soo baxay dhamaadkii 80-meeyadii. Laakin 90-meeyadii ayaa yimid oo raasamaal gaar ah leh, waxay mar kale la wareegi karaan shirkadda.
Intee in le'eg ayaad rabtaa inaad kharash garayso?
Waxaan kaa caawineynaa inaad hesho doorashada ugu fiican adiga
Mashiinka dharka » Mashiinnada dharka alfa
103 faallooyin ku saabsan "Mashiinnada dharka Alfa"
Bethzaida Zoppi ee Gorne
Janaayo 7, 2018 markay ahayd 1:01 pm
Subax wanaagsan, waxaan haystaa Alfa Model 482 mashiinka tolida, pinion zigzag waa la dhaawacay waxaanan u baahanahay inaan beddelo. Ma ii sheegi kartaa meesha aan aado si aan uga soo iibsado?
Oo haddii, taas ku guuldareysato, qaabka 482 mar hore waa duugoobay, kee baa mashiinnada Alfa bedeli kara?
Waad ku mahadsantahay hormarinta
January 8, 2018 at 10:19 subaxnimo
Sida aad tidhaahdo, model mashiinka tolida Alfa aad mar dambe macmalay iyo maadaama aynaan ahayn adeeg farsamo, Ma garanayo waafaqid ee pinion ee moodooyinka cusub la kaaga.
Waxaan kugula talinayaa inaad si toos ah ula xiriirto soo saaraha foomka ay ku wataan shabakadooda:
Abriil 2, 2018 markay ahayd 8:10 pm
Waad salaaman tihiin galab wanaagsan,
Hooyaday waxay haysataa mishiin duug ah oo Alfa World ah oo horeba u baahan in lagu beddelo mid kale.
Dhammaan mashiinnada aad kugula talinayso boggaaga, kuwaas oo noqon lahaa kuwa ugu la mid ah dhinaca maaraynta? Hooyaday waa 80 jir, haddii mishiinku aanu la mid ahayn ama aad isku dhow, hubaal ma awoodi doonto inay isticmaasho.
Waad ku mahadsan tahay caawimaadda
Abriil 3, 2018 markay ahayd 9:58 am
Mashiinka Alfa World waa mid aad u da 'weyn, markaa waxaad ka heli doontaa farqi aad u weyn (si ka wanaagsan) mid kasta oo ka mid ah moodooyinka hadda jira, xitaa kuwa aasaasiga ah. Qiimaha ay u leedahay lacagta, malaha kan ugu dhamaystiran waa Style 40.
Waxay leedahay noocyo badan oo tolmo ah, 4-tallaabo oo toos ah badhanka iyo 70W oo awood ah. Waa hubaal inaad jeceshahay.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ii sheeg.
Abriil 3, 2018 markay ahayd 4:18 pm
Mahad badan! Jawaabta degdegga ah iyo si aan shakigayga u nadiifiyo! Waxaan hubaal ku talin doonaa boggan!
Abriil 3, 2018 markay ahayd 4:20 pm
Mahadsanid Sara, waxaan halkaan u joogi doonaa inaan ku caawino 🙂
Abriil 7, 2019 markay ahayd 11:41 am
Waxaan haystaa mishiinka Alfa 393 waana inaan beddelaa, kee baad igula talinaysaa inaan u dhigmo
Abriil 8, 2019 markay ahayd 10:33 am
Waad salaaman tahay,
U dhigma waxay noqon kartaa Alfa Style 40, waxay leedahay nashqad tolmo oo dheeri ah laakiin awooddu waa la mid. Qiimaheedu aad buu u jaban yahay, marka waa iibsi fiican haddii aanad u baahnayn wax kale.
Abriil 4, 2018 markay ahayd 9:42 am
Salaan, shaki ayaa igaga jira inaan iibsanayo qaabka alfa 40 ama alfa nex 45, waxaan u baahanahay inaan si fiican u tolo dhar qaro weyn, ma i caawin kartaa, aad baad u mahadsantahay
Abriil 4, 2018 markay ahayd 9:52 am
Dhib kama yeelan doontid labada nooc midkood sababtoo ah labaduba waxay leeyihiin matoor 70W ah.
Haddii waxa kaliya ee aad u baahan tahay ay tahay inay ku tolan karto maro qaro weyn, markaa waxaan aadi lahaa mid ka jaban labada, taas oo kiiskani yahay Style 40.
Abriil 4, 2018 markay ahayd 10:44 am
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada, ma ii sheegi kartaa qaabka kor 40 uu kaga duwan yahay kan nex 45, waad ku mahadsan tahay oo ka xumahay sababtoo ah waxaan mooday inaan su'aashii hore la soo dirin oo ay soo baxday laba jeer.
Abriil 4, 2018 markay ahayd 10:56 am
45-ka Xiga waxa uu leeyahay noocyo tolmo badan (25 vs. 10 ee Habka 20).
Dhanka kale, dhererka doorsoomiyaha ee Style 20 wuxuu ka socdaa 0 ilaa 4,5mm halka 45ka soo socda uu ka socdo 0 ilaa 4mm.
Haddii kale ficil ahaan waa isku mid.
21-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 1:20 pm
Hello Nacho, waxaan haystay alfa 482, sanado badan, oo waxaan saaray mishiinka, hadda waxaan bilaabay inaan wax badan tolo, waxaan shaki ku jiraa iibsashada mid kale, laakiin waxaan shaki ka qabaa in aysan noqon doonin. si fiican, maxaad u malaynaysaa?
21-ka May, 2019 saacaddu markay tahay 3:12 pm
Runtu waxay tahay in wakhtigu u dhaafay qof walba, oo ay ku jiraan mashiinka Alpha 🙂
Moodooyinka maanta waxay ku siin karaan dareenka inay ka sii xun yihiin sababtoo ah waxay haystaan ​​caag badan iyo, mudnaanta, waxay u muuqdaan kuwo ka sii xoog badan.
Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaaddo tolida, waxaad ogaan doontaa boodbood xagga tayada ah. Mashiinnada hadda jira si ka sii wanaagsan, fudud, waxay bixiyaan naqshado badan oo tol ah oo aad habayn karto waxayna ku yimaadaan dhammaan qiimaha si aad u dooran karto midka aad jeceshahay.
Haddii aad dib u bilowday tolida, ha ka waaban inaad iibsato nooc hadda jira sababtoo ah wax badan ayaad ka heli doontaa.
Abriil 4, 2018 markay ahayd 9:48 am
Hello, waxaan shaki ku jiraa, qaabka alfa 40 ayaa ka fiican, qaabka alfa ilaa 40 ama alfa nex 45, waxaan u baahanahay inaan sidoo kale awoodo inaan tolo dhar qaro weyn, aad baad u mahadsantahay
5-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 12:03 pm
Hello, Waxaan qabaa shaki badan oo u dhexeeya iibsashada style Alfa ilaa 40 ama practic 9. Midkee baad ku talinaysaa?
Salaan iyo mahadsanid.
5-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 10:53 pm
Way adag tahay in lagu taliyo mid ka mid ah labada nooc, maaddaama heerka sifooyinka ay yihiin kuwo isku mid ah, ma jiraan wax farqi ah oo la taaban karo ee awoodda, tirada tolida, maaraynta ama qalabka lagu daro. Wax walba waa isku mid labadaba.
Sidaa darteed, xaaladahan waxaan had iyo jeer kugula talineynaa midka ugu jaban, taas oo kiiskan uu yahay Style Up 40.
Haddii aad qabtid su'aalo kale, noo sheeg.
19-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 7:58 pm
galab wanaagsan, Waxaan arkay mishiinka Alfa ZART 01 305 euro, oo aad uga yar sidii caadiga ahayd. Dhinaca kale waan ka helay, laakiin dhinaca kale, ma aamini karo haddii ay tahay sababtoo ah mashiinku ma buuxinayo filashooyinka. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo ra'yigaaga mashiinkan, ama haddii aad ku taliso nooc kale. Mahadsanid
21-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 9:51 am
Waxaan helnay fariintaadii ku saabsanaa mashiinka dharka lagu tolo ee Alfa Zart 01.
Waa nooc aad u fiican, oo dhexdhexaad ah, sidaas darteed waxay dabooshaa baahiyaha inta badan isticmaalka gudaha iyo kuwa xirfadlayaasha ah. Haddii aad noo sheegto waxa aad filayso, waxaanu ku caawin karnaa wax yar oo dheeraad ah.
Dabcan, ka faa'iidayso bixinta sababtoo ah sidaad aragteen, waxay la socotaa qiimo dhimis aad u wanaagsan, qiimihiisana inta badan aad ayuu u sarreeyaa.
22-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 12:02 am
Waad salaaman tahay Nacho,
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada degdega ah. Aan si fiican u sharaxo, ma aha in rajadayda ay sare u kacday, waa tan iga shakisa in qiimaha si lama filaan ah loo dhimay kala badh ... Waxaan rabay inaan maqlo fikradaada ku saabsan iyo haddii qaabkani uu ahaa mid isbarbar dhigaya qiimahan ama nooc kale oo qiimo u dhigma. Waxaan eegayay noocyo kale, laakiin aniga oo aan garanayn waxaan go'aansaday kan qiimaha. Waxaan mar hore kuu sheegay inay u muuqato dalab aad u wanaagsan, laakiin "wanaagsan" waxay iga dhigtay kalsooni darro... aad baad u mahadsantahay!
22-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 10:12 am
Maskaxda ku hay in Amazon ay aad u kala duwan tahay qiimaha mana aha wax aan caadi ahayn in la helo 40 ama 50% qiimaha dukaanka caadiga ah.
Ha ka shakin in aysan jirin wax dhibaato ah, marka lagu daro mashiinka waxaa si toos ah u iibisa Amazon si aadan wax dhib ah u yeelan doonin soo noqoshada suurtogalka ah haddii aadan ku qanacsanayn, dammaanad, iwm.
Marka la eego heerka sifooyinka, waxay noo muuqataa in ay si fiican u dabooli doonto baahiyahaaga maadaama ay tahay mashiinka dharka ee u dhow goobta xirfadeed marka loo eego midka gudaha. Waa fursad weyn oo aan shaki ku jirin.
22-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 8:54 pm
Waxaan rabay in aan soo iibiyo alfa style 30 ama ilaa 30 waxayna ii sheegeen dukaanka qalabka in aysan i waydiin karin sababtoo ah kani waa qaabkii hore ee alfa xiga 830… taasi run ma tahay? Hadday sidaas tahay, ma leeyihiin astaamo isku mid ah?
23-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 10:25 am
Magacaygu waa Nacho, waxaan kuugu soo qorayaa faallooyinka aad nooga tagtay mareegta harqaanka.
Marka la eego shakigaaga, waxaan ku ogeysiinayaa in labadaba Alfa Style UP 30 iyo Style 30 ay diyaar yihiin. Labaduba wali waa iib
Sida Alfa Next 830, uma eka inay noqon doonto beddelka moodooyinka hore, ugu yaraan taasi waa waxa bogga wax soo saarku tilmaamayo. Marka la eego heerka astaamaha sidoo kale isku mid maaha. Tusaale ahaan, Style UP 30 wuxuu leeyahay 23 tol, Style 30 wuxuu leeyahay 19 tol, 830 soo socdaa wuxuu leeyahay 21 tol.
Heerka awoodda, saddexda nooc waxay leeyihiin 70W.
Laakiin sida aan kuu sheegayno, labadaba Style UP 30 iyo Style 30 labadaba waa la iibinayaa mana jiraan calaamado liddi ku ah. Waxaa laga yaabaa inuu jiro jabin saamiyo keenaya dib u dhac iyo bedel ahaan waxay bixiyaan Next 830 laakiin ma hayno macluumaadkaas.
23-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 6:25 pm
Hello Nacho, aad baad u mahadsantahay….Ma garanayo sababta ay tan iigu sheegeen… si fiican halkan waa su'aal kale...haddii aan mashiin ka soo iibsado mareegaha iyo xaaladaha qaarkood waxaan u baahan doonaa dammaanadda halkee ayaan aadayaa…?? ? Waxaan ka walaacsanahay inaan ka iibsado online ka bacdina meesha aan ka qaadanayo ayaa aad u fog...waxaan ka imid Alzira (Valencia)
24-ka May, 2018 saacaddu markay tahay 11:07 am
Haddii aad si toos ah uga soo iibsato Amazon (maaha qolo saddexaad oo Amazon ku iibisa) wax dhib ah ma yeelan doontid. Waa mid ka mid ah mareegaha ugu adeega macaamiisha oo ay wax ka qabtaan wixii dhibaato ah, mararka qaar xitaa waxay soo celiyaan lacagtii ay ku soo iibsadeen haddii mishiinku xumaado sanad ka dib oo aan la hagaajin karin, wax aanad meel kale ka heli doonin.
Waxaad sidoo kale wici kartaa soo saaraha si uu ula wareego mishiinka. Tani waa waxa lagu sameeyo xarun kasta oo muujinta qaansheegta wax iibsiga ayaa ku filan inay dayactiraan.
Waxaan rajeynayaa in tan aad leedahay kalsooni dheeraad ah si aad wax uga iibsato internetka.
June 12, 2018 at 10:57 waxaan ahay
Hello. Waxaan ka fekerayaa inaan iibsado mishiinka zart1, ma ii sheegi kartaa inta tol ee uu leeyahay daqiiqadii? Waxaan eegay goobo kala duwan mana aan helin.
Juun 12, 2018 markay ahayd 7:26 pm
Salaan Maria Jose,
Soo-saareyaashu ma bixiyaan macluumaadkan, markaa ma hayno macluumaadkaas. Waan ka xunahay.
Juun 18, 2018 markay ahayd 6:43 pm
Waxaan ka fekerayaa inaan iibsado mashiinka dharka, laakiin weligay ma tolin. Waxay noqon lahayd isticmaalka guriga iyo in ka badan oo loogu talagalay farsamada gacanta, dharka marka loo eego isticmaalka maalinlaha ah. Waxaan ka labalabeynayaa inta u dhaxaysa alfa compact 100 iyo alpha practick 9. Aad baad u mahadsantahay
Juun 18, 2018 markay ahayd 9:57 pm
Waxaan ahay Nacho oo waxaan kuugu soo qorayaa shaki kaaga jira mishiinnada harqaanka ee aad noo sheegtay.
Haddi aanad waligaa tolliin ka hor, labaduba waa mashiinno wanaagsan oo lagu bilaabo. Dabcan, haddii aad u maleyneyso in wax yar in yar aad sameyneyso waxyaabo badan oo kakan, Practik 9 wuxuu sii socon doonaa waqti dheer maadaama uu xoogaa awood badan yahay sidoo kale wuxuu leeyahay fursado badan oo dheeri ah heerka tolitaanka.
Compakt 100 way fududahay in la maareeyo maadaama ay ka sahlan tahay. Haddii aad bilaabayso oo aanad weligaa taaban mishiinka tolida, waxa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaarka lagu taliyey inaad bilowdo oo aad aragto haddii aad jeceshahay adduunka tolida. Dabcan, labada midkoodna waad saxan tahay haddii aad bilowdo.
June 19, 2018 at 10:50 waxaan ahay
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado ra'yigaaga ku saabsan 840-ka soo socda, iyo sidoo kale sanadka uu yahay iyo haddii lagu beddelay nooc kale. Mahadsanid
June 19, 2018 at 11:11 waxaan ahay
Qaabkan gaarka ah waa mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan ee Alfa maadaama aad isticmaali karto haddii aad baraneyso ama aad khibrad u leedahay adduunka tolida. Waxay leedahay 70W oo awood ah (oo la mid ah mashiinnada qaaliga ah), 34 nashqado tol ah, 6 saf oo quudin ah iyo dalool 4-tallaabo ah.
Sida sanadka wax soo saarka, xogta ugu saxsan ee aan helnay ayaa ah in laga soo bilaabo sanadka 2017, sidaas darteed ma jirto saadaal ah nooc kasta oo bedeli doona muddada gaaban.
Shaki la'aan, mid ka mid ah moodooyinka ugu dhameystiran ee sidoo kale hadda iibka ah.
Juun 19, 2018 markay ahayd 10:57 pm
Hello!! Waxaan rabaa inaan u beddelo mashiinka Alfa Inizia nooc kale oo ka sarreeya tan iyo hadda waxaan siinayaa adeegsi badan waxaanan rabaa xirfado badan oo dhameystiran laakiin aniga oo aan tagin mashiinka warshadaha ee xirfadleyda ah. Maxay noqon lahayd doorashada wax iibsiga ee wanaagsan? Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay
June 20, 2018 at 9:01 waxaan ahay
Laga soo bilaabo waxaad tiraahdo, Alfa Practik 9 waa qaabka ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo waxaad rabto. Waxay leedahay dhammaan sifooyinka mashiinkaaga hadda iyo qaar kaloo badan si aad u hesho kuwa xirfadlayaasha ah ee aad raadinayso.
Intaa waxaa dheer, in aad ka soo jeedo isla astaanta waxaad baran doontaa isticmaalkeeda laga bilaabo maalinta koowaad. Hadda waan eegay oo waa sax iib.
June 20, 2018 at 11:14 waxaan ahay
Waxaan eegayay, waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa waa elektarooniga. Waxaan jeclaa Alfa Smart Plus laakiin ma garanayo inay tahay doorashada ugu fiican iyo in kale. Ma garanayo haddii uu jiro mid la mid ah oo in yar ka jaban qaabkaas.
Juun 20, 2018 markay ahayd 1:50 pm
Salaan mar labaad Maryan,
Haddii aad u guurto miisaaniyadahaas, Alfa Smart + waa ikhtiyaarka ugu fiican, sidoo kale waa iib iyo € 40 farqiga waa u qalantaa maadaama ay keeneyso wax yar oo tolmo ah (100 marka la barbardhigo 70) iyo horumarino kale oo yaryar.
Haddii aanad doonayn in aad kharash badan ku bixiso, waxa kale oo aad haysataa mishiinka dharka elektarooniga ah ee Alfa Compakt E500 Plus, waxa uu ku kacayaa ku dhawaad ​​kala badh laakiin xagga waxqabadka aad ayuu uga hooseeyaa.
Juun 20, 2018 markay ahayd 4:22 pm
Waxaan u maleynayaa in Alfa Smart Plus ay noqon doonto doorashadayda, in kasta oo fikradda ah in laga dalbado internetka dayactirka, hagaajinta, dammaanadda…. laakiin magaaladayda waxaa ku yaal hal dukaan oo mashiinka ah mana la shaqeeyaan Alfa. Wax talo ah markaad internetka wax ka iibsanayso? Mahad badan!! Wax badan baad i caawisay
Juun 20, 2018 markay ahayd 4:28 pm
Haddii aad ka iibsato Smart Plus-ka isku-xidhka aan ku soo diray, wax dhib ah kala kulmi maysid (oo lacag badan ayaad kaydsanaysaa). Waa mishiin ay Amazon iibiso oo ay wax walba daryeelaan haddii ay dhibaato jirto.
Alfa sidoo kale waxay leedahay adeeg farsamo oo u gaar ah oo aad u diri karto mishiinka inta lagu jiro xilliga dammaanadda, laakiin sidaan idhaahdo, Amazon waxay daryeeshaa dhammaan hababkaas. Waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyay inaad go'aansato.
Wax kasta oo aad ii sheegto.
June 23, 2018 at 10:45 waxaan ahay
Hello, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii aad leedahay lugta korontada, way jabtay mana isticmaali karo mishiinka.
June 25, 2018 at 11:06 waxaan ahay
Si toos ah uma iibino alaabta, laakiin waxaad iibsan kartaa qaybta aad raadinayso xiriirkan.
July 3, 2018 saacadu markay tahay 3:13 pm
Hello, waxaan shaki ku jiraa inta u dhaxaysa alfa practik 9 iyo alfa 474. Farqiga u dhexeeya qiimaha wuxuu ku saabsan yahay 100 euro laakiin waxaan rabay inaan ogaado fikradaada ah inay mudan tahay bixinta farqiga ama midka aad dooran lahayd. Aad baad u mahadsantahay!
July 3, 2018 saacadu markay tahay 3:21 pm
Waad salaaman tahay, Martha,
Alfa 474 waa mid ka mid ah moodooyinka ugu dambeeyay ee shirkadda laakiin aad ayaan u jecelnahay Pratik 9 maadaama uu yahay moodel aad isku dheeli tiran oo xitaa ku garaaca Alfa 474 dhinacyada qaarkood (waxay leedahay 34 tol marka loo eego 23 ee Alfa 474). Labada mashiinada dharka ee Alfa waxay leeyihiin awood isku mid ah (70W).
Dhererka tolmada doorsooma ayaa sidoo kale bixisa kala duwanaansho weyn oo ku saabsan Practik 9. Kaliya waa tirada safafka quudinta iyo ballaca tolida in Alfa 474 uu leeyahay faa'iido.
Ma garanayno waxa isticmaalka aad ku siinayso mishiinka uu noqon doono, laakiin haddii ay tahay mid gudaha ah iyo farsamada gacanta, Practik 9 wuxuu buuxiyaa wax ka badan oo ku filan oo sidoo kale lagu iibinayo ilaa 200 euro.
Qiimahaas ma jiraan wax caddaynaya iibsashada Alfa 474.
July 29, 2018 at 8:57 waxaan ahay
Hello. Waxaan rabaa in aan soo iibiyo mishiinka tolida oo wanaagsan oo i waara oo aan gaabin. Bir, oo aan lahayn qaybo balaastiig ah sida kiiskii bobbin, iwm… oo leh tol laastiko ah, oo xamili kara maryo qaro weyn, jiinis, tuwaalo, tolo siibooyin…. Waxaan arkay qaabka Alfa oo kor u dhaafaya 40. Alfa xiga 45 iyo alfa xiga 40 gu'. Midkee baad ku talin lahayd? Aad ayaad u mahadsantahay!!!!
July 30, 2018 at 10:12 waxaan ahay
Saddexda nooc ee aad sheegtay, Style Up 40 ayaa si fiican ula qabsanaya waxa aad raadinayso. Dhib kama yeelan doontid alaab balaastiig ah ama tolida dhar qaro weyn ama adag sida jeansiinta.
Sidoo kale, waxa wanaagsan ee ku saabsan mashiinkan ayaa ah in laga heli karo qiimo aad u wanaagsan.
Alfa Xiga 45 waxay u muuqataa in la joojiyay (kuma muuqato bogga soo saaraha) iyo Alfa Next 40 guga waa nooc dhowaan ah laakiin leh sifooyin la mid ah Style Up 40 laakiin wax yar ayaa bixiya.
Waxaan rajeyneynaa inaan awoodno inaan ku caawinno.
July 29, 2018 saacadu markay tahay 8:56 pm
Guriga waxa aanu ku haynaa ALFA ELECTRONIC 3940. Waxa uu jiraa in ka badan 35 sano.
Waxaan ugu dambeyntii dooneynaa inaan bedelno.
Ma isiin kartaa talo?
July 30, 2018 at 10:13 waxaan ahay
Miisaaniyaddee haysaa? Waxaan filayaa inaad u baahan doonto Alpha kale oo aragta inta uu sii jiro mishiinka tolida hadda.
Bal u fiirso kuwa aan ku hayno mareegaha oo haddii aanay midkoodna kugu habboonayn, noo sheeg waxaad raadinayso iyo waxa aad doonayso inaad ku bixiso si aad u hesho moodeelka ku habboon waxa aad raadinayso.
Ogosto 4, 2018 markay tahay 2:05 pm
Salaamu caleykum .Salaan iyo mahadsanid.
Ogast 6, 2018 at 8:42 am
Magacaygu waa Nacho, waxaanan kuu soo qorayaa su'aasha ku saabsan mashiinka dharka lagu tolo ee aad dooranayso: Style 40 ama 830 Xiga.
Labada mishiinba si ficil ahaan isku mid ah: waxay leeyihiin awood isku mid ah, dhererka tolmada beddelka ah iyo ballaca, 6 saf oo eyda quudinta, iwm.
Farqiga kaliya ee la dareemi karo ayaa doorbidaya Style 40, kaas oo leh 31 naqshado tolid ah marka loo eego 21 ay bixiso 830 soo socda
Ogosto 8, 2018 markay tahay 4:59 pm
Waxaan ku fikirayay inaan iibsado Zart 01. Asal ahaan waxaan u baahanahay inaan haysto alifbeetada waxaanan ka helay iib iyadoo loo eegayo qiimihiisii ​​caadiga ahaa 465 eur. Ma garanayo inay tahay doorasho wanaagsan iyo in kale. Gudaha ugu jaban ee alifbeetada, ma garanayo inay tahay doorashada ugu fiican
Ogosto 20, 2018 markay tahay 12:00 pm
Ogosto 13, 2018 markay tahay 11:16 pm
Waxaan ku dhowahay inaan ku qanacsanahay inaan iibsado Alfa smart plus, waxa iga yaabiyay waa inaysan lahayn tolida xad dhaafka ah, shay kan caqliga leh uu haysto... uma eka mid macquul ah, sax?
Ogast 20, 2018 at 11:59 am
Waanu eegnay oo aanu ku aragnay tolida dusha sare ee qaybta tolmada aasaasiga ah, halkan waxaad ku arki kartaa dhamaantood:
Maarso 22, 2019 markay ahayd 6:40 pm
Hello, waxaan rabay inaan iibsado Alfa zart 01 ama curvy faneedka 8770. Aniga iyo aniga waxaan haysanaa Alfa 2104 waxaanan rabaa inaan wax badan ku sameeyo mishiinka. Midkee kula talin lahayd??. Wacan oo dhan.
Maarso 25, 2019 markay ahayd 11:38 am
Labada nooc ee aad sheegtay waxaa ka mid ah, kan ugu dhameystiran waa Zart 01 shaki la'aan. Aad uga casrisan laakiin waliba aad uga qaalisan qaabka Singer Curvy ee aad rabto.
In kasta oo labaduba ay yihiin mashiinno elektaroonik ah oo aad u dhammaystiran, kuma tartamaan isku horyaal tan iyo Zart 01 waa guuleystaha cad, qiimo aad u sarreeya.
Sebtember 5, 2018 saacaddu markay ahayd 1:01 am
Salaan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa ay tahay fikirkaaga ku saabsan Alfa 2190 iyo maxay ku kala duwan yihiin qaabka 2160, aad baad u mahadsantahay
Sebtember 5, 2018 saacaddu markay ahayd 9:45 am
Qaabka Alfa 2190 waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran ee aad iibsan karto maanta, waxaa ficil ahaan loo tixgelin karaa moodel xirfad leh.
Farqiga u dhexeeya 2160 waa wax aad u yar. Marka loo eego Alfa 2190 waxaad haysataa laba jeer tirada tolida (120 vs. 60), 2 alifbeetada, balacka zigzag variable ee kala duwanaansho weyn, iwm.
Labaduba waa mashiinno wanaagsan, laakiin kala duwanaanshaha ku dhawaad ​​€ 200 ee qiimaha ayaa lagu arki karaa heerka astaamaha.
Sebtember 19, 2018 saacaddu markay ahayd 9:21 am
Waxaan ka fekerayaa inaan iibsado Alfa 2190, laakiin weli waxaan la yaabanahay haddii ay ka adkaan karto iyada oo gooynaysa dharka isku mar iyo in kale. Xaashiyaha xogta qaarkood waxaan ka fahmay haa, qaarna inay ku xidhan tahay cagta riixaysa,… Waxaan sidoo kale u malaynayaa, in ka badan, isticmaalkeeda dhar tolan (nooca funaanad). Inta soo hartay, waxaan fahamsanahay in mashiinkani uu ii fiicnaan doono inaan beddelo Alfa Inizia dhowr sano ka hor iyo inay iga caawin doonto dhammaan noocyada dharka (oo ay ku jiraan jeansiinta, dharka ...). Waa maxay ra'yigaaga? ma jiraan wax kale oo la mid ah kan? (Xitaa noocyada kale…).
Sebtember 19, 2018 saacaddu markay ahayd 9:42 am
Iyadoo la tixraacayo shakigaaga, mashiinka Alfa 2190 waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran suuqa, waxay ku dhowdahay qaybta xirfadeed marka loo eego tan gudaha, sidaas darteed waxaad samayn kartaa wax kasta oo aad noo sheegto.
Waxa aanay lahayn waa gooyaha dharka aad sheegtay, ugu yaraan kuma aragno shaqadaas buug-gacmeedka tusaalaha. Waxay leedahay xadhig toos ah oo toos ah laakiin ma jiraan wax dheeraad ah.
Ma garanayo in tani ay adiga cuuryaan tahay. laga yaabaa inaad u baahan tahay mid korkahaarka kuwaas oo dhan sida caadiga ah ay ku jiraan gooyaha dharka.
Oktoobar 3, 2018 markay tahay 6:36 pm
Salaamu caleykum waraxmatulaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan eegay qaabka 40 ee alfa iyo waajibaadka culus 4423 ee heesaha. maxaad igu talin lahayd
Oktoobar 8, 2018 markay tahay 4:33 pm
Labada mishiin ee aad noo sheegtay waxay leeyihiin awood ka badan oo ku filan inkasta oo Fanaanada culusi ay ka sareeyso. Haddii aad khibrad u leedahay mashiinka noocan oo kale ah oo aadan rabin in uu hoos u dhaco, Fanaanada ayaa fiican.
Oktoobar 5, 2018 markay tahay 10:20 pm
Hello, waxaan had iyo jeer lahaa mashiinka tolida ee aasaasiga ah si aan ugu sameeyo mashruucyo yaryar guriga. Hadda, aniga iyo carruurta, waxaan jeclaan lahaa inaan soo iibsado qaar ay isticmaali karaan si ay magacyadooda ugu dhejiyaan dharkooda oo ay u sameeyaan waxyaabo yaryar oo aad u faahfaahsan. Waxaan ka labalabaynayaa inta u dhaxaysa Alfa Smart+ iyo Alfa Zart01, kee baad ku talinaysaa?
Oktoobar 8, 2018 markay tahay 4:47 pm
Labada mishiinba waxay dabooli doonaan baahidaada, inkastoo baahidaada, Alfa Zart 01 ay leedahay tiro badan oo ah tolmo iyo calaamado alifbeetada, markaa way ku habboon tahay inaad sameyso magacyadaada iyo shaqooyin badan oo adag. Sidoo kale wax yar ayay ka jaban tahay.
Alfa Smart Plus tignoolajiyad ahaan aad ayuu u horumarsan yahay (inkasta oo astaamihiisa ay ka hooseeyaan haddaynu ka hadalno tolida si gaar ah) laakiin waxa ay leedahay deked USB ah, muraayad midab leh oo tusinaysa tallaabo tallaabo ah ee farsamada gacanta, iwm.
Noofambar 20, 2018 saacaddu markay ahayd 11:47 pm
Hi, waxaan ku fekerayaa inaan soo iibiyo mashiinka dharka ee ugu horreeya, waxaan eegay noocyo badan oo kala duwan oo aan kala dooranayo dhaqanka Fanaanada 2282 ama Alfa Style 30. Kee baad ku talinaysaa? Mahadsanid.
Noofambar 21, 2018 markay ahayd 9:36 am
Subax wanaagsan Paula,
Alfa Style 30 waa ka sarreeyaa, sidoo kale xoogaa qaali ah laakiin waxaan aaminsanahay inay u qalanto farqiga, gaar ahaan hadda iyadoo la tixgelinayo in farqiga qiimaha uu yahay mid aad u yar mahadsanid Black Friday.
Noofambar 23, 2018 saacaddu markay ahayd 1:39 pm
Hello Nacho, subax wanaagsan.
Waxaan ka fekerayaa inaan iibsado mashiinka dharka.
Waxaan tuuray astaanta heesta, waxaan u janjeeraa dhanka Alfa 2190 iyo Alfa Smart Plus. Waxaa jira kala duwanaansho qiimo leh, laakiin ficil ahaan ma garanayo waxa ay ku kala duwan yihiin ama faa'iidooyinka ay ii jeedinayaan hal nooc ama mid kale.
Asal ahaan waxaan u rabaa patchwork, laakiin isla mar ahaantaana waxaan rabaa in ay noqoto mid la taaban karo, taas oo ah, in aan awoodo in aan sameeyo (fudud) waxyaabo.
Waxaan ku arkay cashar ku saabsan Smart Plus, si daacad ah, waa kacaan, laakiin ma arkin wax fiidiyow ah Alfa 2190, markaa ma garanayo inay fududahay in la isticmaalo.
Ma lihi fikrad badan oo ku saabsan tolida mishiinka, run ahaantii waan baran doonaa.
Ma ila talin kartaa
Noofambar 23, 2018 saacaddu markay ahayd 3:44 pm
Labada nooc ayaa shaki la'aan ah kuwa ugu sarreeya Alfa sidaas darteed kala duwanaanshuhu waa kuwo qarsoodi ah laakiin muhiim ah.
Tusaale ahaan, Alfa 2190 wuxuu leeyahay 20 tolmo oo ka badan kan Smart Plus.
Farqi kale oo muhiim ah ayaa ah bandhigga iyo maaraynta. Smart Plus-ku waa mid dareen badan leh iyada oo ay ugu wacan tahay shaashadda taabashada weyn ee aad ka soo geli karto farshaxannada adoo adeegsanaya USB oo aad si toos ah u raacdo tallaabo-tallaabo si toos ah halkaas, taasi waa wax aanad ku samayn karin Alfa 2190, tusaale ahaan.
Inta soo hartay waxay isku mid yihiin, inkastoo qaabka 2190 uu yahay mid xirfad leh. Qaadashada mid ama mid kale waxay kuxirantahay haddii aad doorbidayso fududaynta isticmaalka iyo tignoolajiyada-goynta marka la barbar dhigo mashiinno dhaqameed badan laakiin sidoo kale xirfadlayaal badan. Labaduba waa mashiinno wanaagsan.
Noofambar 25, 2018 saacaddu markay ahayd 11:54 pm
Hello Nacho, fiidkii wanaagsan. Waxaan ka fekerayaa inaan iibsado mishiinka loogu talagalay isticmaalka guriga, waxaan arkay dhowr nooc mana garanayo midka aan dooranayo: style up 30, practik 5, ama singer1507, inkastoo ay yiraahdaan kan dambe ayaa sameeya buuq badan. Haddii kuwani ku qanci waayaan ama ay yihiin moodal hore, waxaan jeclaan lahaa inaad mid igala taliso. Mahadsanid
Noofambar 26, 2018 markay ahayd 8:35 am
Salaan Maria Jesus,
Mashiinnada aad soo jeediso, waxaan ku dhejin lahaa Style 30 ama Practik 5. Waxaad sidoo kale nasiib u yeelatay tan iyo Style 30 halkan si weyn ayaa loo dhimay sababtoo ah waa Cyber ​​​​Isniinta, waxa kaliya ee aad leedahay inaad iibsato maanta.
Waxa kale oo aad haysataa heshiisyo badan oo kala duwan oo ku saabsan moodooyinka kale ee Fannaaniinta, iska hubi haddii mid ku habboon yahay.
Su’aal kasta oo aad ii sheegto.
Diisambar 23, 2018 markay ahayd 12:00 pm
Haye subax wanaagsan!
Waxaan ka fekerayaa inaan saaxiibteyda siiyo mishiinka tolida, wax yar baan sharxi doonaa si aan u arko inaad ila talin karto iyo in kale.
Hadda waxay u samaynaysaa qayb ka mid ah alaabteeda bakhaarkeeda, waxayna siisaa tamar badan, waxaan ula jeedaa saacado iyo saacado tolasho aan joogsi lahayn.
Qaar ka mid ah alaabooyinkaas waxay leeyihiin 4 lakab ama ka badan oo dhar ah, sidaas darteed sidoo kale waa inay noqotaa mid adag.
Ilaa hadda wuxuu la socday 30 xiga, laakiin wuu burburay, weli ma garanayno waxa ku dhacay, laakiin waxaan rabaa inaan siiyo mid cusub.
Maxaad igula talinaysaa
Sababtoo ah inta aan eegayo ma arko farqiga u dhexeeya qaabka, soo socda, praktic, iwm.
Tirada tolida dhib ma leh sababtoo ah dhamaadka wuxuu had iyo jeer sameeyaa 2 ama 3 caadiga ah, markaa waxaan qiyaasayaa in tani aysan ahayn qodob go'aaminaya.
30-ka gu' ee soo socda ayaa hadda lagu iibinayaa Amazon at 110, laakiin maadaama ay la mid tahay tii aan haystay, way i baqaysaa mana garanayo in mid ka sarreeya uu fiicnaan lahaa.
Waxaan bixin karaa wax ka badan, 200 ama 250 haddii loo baahdo runtiina waa u qalantaa.
January 2, 2019 at 8:47 subaxnimo
Waa wax la yaab leh waxa aad ka tiraahdo 30-ka soo socda maadaama uu yahay mid ka mid ah mashiinnada la isku halayn karo laakiin sida wax kasta oo noloshan ah, way dhici kartaa. Ma qorsheyneysaa inaad dayactirto?
Haddii aad rabto in aad iibsato wax ka wanaagsan waxa aad lahayd, Practik 9 waa nooc aad loo jecel yahay hadda oo ku dhaca miisaaniyadaada. Waxaad ka iibsan kartaa iibka halkan.
Haddii aad wax su'aalo ah qabto ii sheeg.
Febraayo 3, 2019 markay ahayd 11:10 pm
Hello, wanaagsan, waxaan ka fekerayaa inaan soo iibiyo mishiin gudaha ah oo aniga ii shaqeeya oo aan wax dhib ah ku qabin marka ay timaado samaynta gunta hoose ee jiinis sida dharka funaanadda. Midka aan guriga ku haysto waa Refrey Transform 427 waana qiyaastii 37 sano jir, si sax ah ayuu u shaqeeyaa inkasta oo aan sanado badan jiray, waxaan eegay shabkada oo aan aad u wareeray (waxaa jira noocyo badan). Waxaan ka helay Alfa practik 7, qaabka Alfa 40 iyo fannaanka culus ee 4423. Ma garanayo in nooc kasta oo aan ilduufay ay ka fiicnaan lahayd ...
Midkee baad ku talinaysaa?
February 4, 2019 at 9:39 waxaan ahay
Saddexda nooc ee aad sheegtay, Alfa Pratik 7 waxa ay la qabsanaysaa waxa aad raadinayso. Dhib kama yeelan doontid alaab balaastiig ah ama tolida dhar qaro weyn ama adag sida jeansiinta.
Dabcan, haddii aad rabto inaad si badbaado leh ugu ciyaarto, Singer Heavy Duty 4423 wuxuu leeyahay 90W matoor marka la barbar dhigo 70W ee moodooyinka Alfa, sidaas darteed waxay leedahay awood dheeraad ah oo lagu dhex maro dhar adag sida denim.
Farqiga yar ee qiimaha, waxaa laga yaabaa inay mudan tahay iibsashada Duty Heavy Heavy Heavy.
Febraayo 28, 2019 markay ahayd 5:01 pm
Hello Nacho. Markii aan bilaabay tolida waxaan soo iibsaday Alfa Next 20 kaas oo aad u fiican. Hadda waxaan u baahanahay in aan soo iibiyo mishiin kale oo dharka lagu tolo si aan meel kale u haysto. Waxaan arkay Alfa Compack100 oo aan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay wanaagsan tahay, tan iyo hadda waxaan tolaa dhammaan noocyada shaqada tolida. Ma i hagi kartaa haddii ay tahay doorasho wanaagsan?
Oo kiis gaadiid Alfa ma u shaqeeyaa mashiinkan?
Maarso 1, 2019 markay ahayd 9:57 am
Waa mishiin qiimo weyn ku fadhiya oo lacag ku leh oo ku siin doona adeeg aad u fiican sida 20ka soo socda. taas oo wax walba ku samayn karta.
Dhanka daboolka, midka aad sheegtay ayaa la jaan qaadaya dhammaan mishiinnada tolida ee Alfa ee taxanaha xiga iyo Compakt, si aadan wax dhibaato ah ula kulmi doonin.
Maarso 15, 2019 markay ahayd 4:34 pm
Hello, inta u dhaxaysa alfa zart01 iyo alfa2190 kee fiican?
Maarso 18, 2019 markay ahayd 9:54 am
subax wanaagsan Bea,
Waxaan kuu soo qorayaa fariinta aad nooga tagtay ee ku saabsan mishiinka dharka ee Alfa Zart01 iyo Alfa 2190.
Labaduba waxay ku dhow yihiin mashiinnada tolida ee xirfadda leh laakiin leh ujeedooyin kala duwan. Zart 01 wuxuu leeyahay tolmo badan oo badan halka Alfa 2190 uu si aad ah diiradda u saarayo Patchwork, sidaas darteed dusha sare ee shaqadu waa ka weyn tahay waxayna leedahay miiska kordhinta.
Waxa hubaal ah ayaa ah in hadda aad ku heli karto Zart01 qiimo aad uga jaban kan rasmiga ah, sidaa darteed dheelitirka ayaa aad ugu janjeera moodelkan.
Maarso 22, 2019 markay ahayd 1:17 am
Salaan, inta u dhaxaysa 30ka gu'ga xiga iyo qaabka 30, kee baad kula talinaysaa qof hadda bilaabaya? Mahadsanid
Maarso 22, 2019 markay ahayd 10:06 am
Waxaan wax kuugu soo qorayaa fariinta aad nooga tagtay ee ku saabsan mishiinada dharka.
Inta u dhaxaysa Alfa Next 30 iyo Style 30, labaduba waa isku mid. Alfa Style 30 waa wax yar oo casri ah oo bixiya hal tol oo ka badan kan soo socda 30 gu'ga, oo ay weheliso sidoo kale waa ka jaban yahay, marka waxaan aad ugu tiirsanahay qaabkan.
Maarso 24, 2019 markay ahayd 2:00 am
Hello! Waxaan naftayda u huray inaan wax ka beddelo iyo dawaarashada, sidaas darteed waxaan jacayl badan u hayaa mashiinka maadaama ay tahay aaladdayda shaqada. Waxa aan gurigayga ku dhex leeyahay mishiin warshadaysan oo ii soo gudbisa dunta ugu xooga badan, bakhaarkaygana waxa aan hore uga haystay Alfa Zig Zag, laakiin way jabtay, waxaanan u baahanahay in aan badalo mishiinkaas si aan u haysto mid ka mid ah dukaanka si uu uga shaqeeyo, maya aniga Waxaan rabaa mid elektaroonik ah uma baahni inaan haysto noocyo badan oo tolmo ah tan iyo dhamaadka waxaan kaliya isticmaalaa kuwa ugu aasaasiga ah laakiin waxaan u baahanahay inaan xoogaa xoogaa xoog yeesho maadaama ay tahay inaan tolo dhar dhexdhexaad ah oo adag (sida dhumuc weyn). jiinis, maqaar, xargo, jaakad... ) Horeba waa inaan shaqadayda guriga u kaxeeyaa si aan ugu tolo warshadda. Waxaan fiirsaday moodooyinka oo waxaan helay xoogaa jahawareer sababtoo ah waxaan u arkaa inay isku dhow yihiin, gaar ahaan guga soo socda iyo moodooyinka qaabka, ma garanayo inaan qaato 20 ama 30 (style ama guga). ??) ama kan Xiga 840. Kee baad ku talinaysaa? Waxaan sidoo kale eegay fannaanka culus ee 4411 laakiin marka la eego sifooyinka waxay aad ula mid tahay alphas iyo alfa cubic qiimo. Ma i caawin kartaa? Mahadsanid
Maarso 25, 2019 markay ahayd 11:33 am
Waan fahmay shakigaaga maadaama dhammaan moodooyinka aad sheegtay ay isku mid yihiin.
Markaan arko baahiyahaaga, waxaan sharad ku geli lahaa qaabka ugu jaban ee dhammaan kuwa aad sheegtay. Dhammaantood waxay toli karaan dhar qaro weyn sida jiinis dhib la'aan iyo haddii wax badan ama ka yar oo tolid ah aysan ahayn wax adiga kugu khuseeya, waxaa fiican inaad sharad ku dhejiso qaabka qiimaha ugu fiican ee lacag maadaama ay dhammaantood leeyihiin isku mid. awood.
Xaaladdan oo kale, Alfa Style 20 waa kan ugu dhaqaalaha badan.
Waxaan rajeynayaa inaan waxtar helay.
Maarso 24, 2019 markay ahayd 12:55 pm
Subax wanaagsan, waxaan qabaa shakiyo isdaba-joog ah markaan dooranayo mashiinka dharka lagu tolo oo ii socon doona waqti dheer oo wanaagsan. Xaqiiqdu waxay tahay in sanadkan aan bilaabayo daraasado ku saabsan moodada, naqshad samaynta, iwm… Oo waxaan eegayay noocyo kala duwan waxaanan ku wareeray xulashooyin badan oo kala duwan. Alfa Practik 9 iyo The Singer Heavy Duty 4432 ayaa dareenkayga soo jiitay, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado labada midkood ayaa door wanaagsan u ah waxbarashadayda muddada dheer, ama haddii, liddi ku ah, waxaad ku talin lahayd nooc kale oo mashiinno ah. . Waa inaan sheego inaan wax khibrad ah u lahayn mishiinnada dharka. Salaan, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
Maarso 25, 2019 markay ahayd 11:27 am
Waad salaaman tahay Faustino,
Waxaan kuugu soo qorayaa fariinta aad nooga tagtay websaydkayaga mashiinka dharka lagu tolo oo aan weydiinayno noocyo kala duwan.
Alfa Practik 9 iyo Duty Heavy Duty waa moodooyin isku mid ah, kala duwanaanshoodu waa yar yahay marka laga reebo dhowr tolmo oo dheeraad ah oo ku saabsan kiiska Alfa ama muuqaal yar oo u heellan Heesaha.
Waxa jira farqi weyn oo u dhexeeya qiimaha labada nooc, Alfa Pratik 9 waa 50 euro oo ka jaban, marka xagga qiimaha lacagta waxaanu dooranay moodelkaas.
Olalla Diaz Garcia
Maarso 26, 2019 markay ahayd 11:46 am
subax wanaagsan Nachos,
Waxaan qabaa su'aal, waxaan haystaa mashiinka dharka ee Alfa Style Up 40. Ma ku toli karaa irbad mataano ah mashiinkan? Tilmaamuhu waxba ma sheegaan, laakiin waxaan raadinayay macluumaad ku saabsan forumyada kale waxayna yiraahdaan waxaad ku toli kartaa irbadda noocan oo kale ah mishiin kasta, adigoo haysta laba dhejis oo lagu dhejiyo. Tani waa sidaas.
Maarso 27, 2019 markay ahayd 2:48 pm
Xaqiiqdu waxay tahay inaanan xaqiijin karin hadda, waxa ugu fiican ayaa ah inaad wacdo adeegga farsamada ee Alfa si ay uga jawaabaan su'aashaada. Waan ka xumahay.
Maarso 27, 2019 markay ahayd 12:23 pm
Waxaan shaki ka qabaa labada nooc ee zart 01 ama kuwa caqliga leh
Had iyo jeer waxaan la shaqeyn jiray mashiinka dharka ee hooyaday, kaas oo ah midka aan hadda haysto, dib u soo celinta halyeeyada, laakiin waxaan u maleynayaa in waayo-aragnimadeeda ay ka dhigan tahay in bobbin inta badan uu ku dhego.
Waxaan jeclaan lahaa inaad ila taliso
Maarso 27, 2019 markay ahayd 2:47 pm
Zart 01 waa doorasho weyn oo aad ka iibsan karto halkan iibka mana jiro tartame ka socda noocyo kale oo hadhdin kara. Midda kaliya ee aan kugula talin karo khadkan waa Alfa Smart Plus, waxay leedahay naqshado tolmo yar laakiin waxay leedahay shaashad si aad u faahfaahsan u raacdo casharrada tallaabo-tallaabo ah.
Haddii adiga shaashadda taabashada aysan noqon doonin mid aad waxtar u leh, iibso Zart 01 shaki la'aan.
June 24, 2019 at 11:45 waxaan ahay
Waxaan xiiseynayaa mashiinka alfa practik 9 ama 474 oo aad igala talin lahayd?
Juun 24, 2019 markay ahayd 3:08 pm
Waxaan kuugu soo qorayaa fariinta aad nooga tagtay mareegtayada harqaanka.
Inta u dhaxaysa Alfa Pratik 9 iyo Alfa 474 waxaa jira ku dhawaad ​​100 euro oo farqi ah marka loo eego qiimaha rasmiga ah ee astaanta.
Dhinacan, Practik 9 wuxuu leeyahay tolmo badan, laakiin dhinacyada intiisa kale Alfa 474 waa mid aad u dhammaystiran ( safaf badan oo ilko quudin ah, tolmo la beddeli karo, iwm). Haddii farqiga qiimahaas uusan ahayn arrin adiga kugu saabsan, Alfa 474 waa guuleyste cad.
Haddii, dhanka kale, aad doorbidayso inaad badbaadiso kuwa € 100, waxaad ka iibsan kartaa Alfa Pratik 9 oo iib ah oo weli waxaad heli kartaa mashiinka dharka lagu tolo oo aad u karti badan oo leh fursado badan oo kala duwan.
Ugu dambeyntii waxay ku xiran tahay xoogaa baahidaada, laga yaabee in Practik 9 uu ka badan yahay isticmaalka aad siin doonto, laakiin maadaama aadan na qeexin, ma noqon karno mid si gaar ah u gaar ah.
July 23, 2019 saacadu markay tahay 7:10 pm
Hi, Waxaan haystay mishiinka dharka ee Alfa Zart 01 muddo afar bilood ah, waxaan isticmaalayay ilaa hal bil, dhibaato ayaa iga haysata ogaysiiska barelaha.
Marka bobbin uu haysto dun yar, mishiinka tolida ayaa kuu digaya oo joogsada.
Marka bobbinka la buuxiyo wuu igu sii digayaa oo iima ogola in aan tolo, way sii wadaysaa digniintaasi xitaa marka boobku shidan yahay, waxaan hubiyay in ay fiican tahay, in aanay lingax jirin, waxaan isku dayay in aan dami mishiinka waxba.
Tilmaamaha ma jiraan wax la xidhiidha dhibaatadaas, markaa way iga xanaaqday.
Ma garanayo in aad khibrad la mid ah ii soo martay iyo in aad sina ii caawin karto.
July 24, 2019 at 8:59 waxaan ahay
Runtu waxay tahay dhibka idin haysta waa naadir, waligeed nagumay dhicin, anaguna maanu maqal.
Maadaama Zart 01 uu yahay mashiin si cadaalad ah u horumaray, waxa fiican inaad wacdo adeega farsamada ee Alfa, una sheeg lambarka khaladka ah ee mishiinku ku siinayo oo ay hubaal ah inay kugula talin karaan si ka sii wanaagsan. Haddii aad tagto shabakadooda, waxa hubaal ah inay sidoo kale haystaan ​​foomka xidhiidhka haddii aad rabto inaad kaydiso wicitaanka.
Haddii ay ku xallin waayaan adiga, maadaama mashiinka dharka ee Alfa uu jiro 4 bilood oo keliya, waxaad mar walba isticmaali kartaa dammaanadda oo aad dib u hagaajin kartaa.
Sebtember 7, 2019 at 5:17 pm
Hi, nacho, waa in aan soo iibsadaa mishiinka dharka, alfa waan la qabsaday laakiin aad bay u duqowday oo mar hore way dhimatay... dhar badan ayaan u tolaa carruurtayda kuwa iigu dhiba waa dunta. xiisadda baabuurka, markaa waxaan ka fekerayaa alfa compact 500 ama alfa 474 sababta oo ah arrinta soo saaraha toosan, waxay yiraahdaan muhiim maaha in la xakameeyo xiisadda, tani ma runbaa? Oo inta u dhaxaysa makaanikada iyo elektarooniga kee fiican?
Sebtember 9, 2019 saacaddu markay ahayd 9:38 am
Wixii aan ku arkay mareegaha soo saaraha, Alfa 474 waxa kale oo uu leeyahay shuttle si toos ah markaa, mabda 'ahaan, maaha sida aad sheegtay.
Marka laga hadlayo haddii la kala dooranayo mashiinka dharka elektarooniga ah ama mashiinka dharka lagu tolo, kuwa elektaroonigga ah badanaa waa kuwo tayo sare leh, aad u saxsan, waxay shaqeeyaan waqti yar waxayna bixiyaan tiro badan oo tolmo ah. Waxay sidoo kale aad qaali u yihiin, laakiin ka mid ah moodooyinka aad noo soo jeedisay, waxaan ku sharadeynaa Alfa Compakt maadaama farqiga qiimaha u dhexeeya labadu uusan ahayn mid aad u weyn.
Oktoobar 20, 2019 markay tahay 9:29 pm
Galab wanaagsan, waxaan rabaa inaan ku beddelo mashiinka sigma 2000 ee jabay oo aan ku beddelo alfa. Isticmaalku wuxuu noqon doonaa dhammaan noocyada dayactirka, jooniska hoose, dayactirka funaanadda iyo guud ahaan tolida. Waxaan jeclaan lahaa inay noqoto mishiin adag oo adkaysi u leh.
Moodooyinka alfa 4760 ama zart o1 ee la igula taliyay. Midkee baad u malaynaysaa inuu fiican yahay?
Oktoobar 21, 2019 at 8:59 am
Salaan Maria Luisa,
Laga soo bilaabo waxa aad ii sheegto, Alfa Zart 01 waxay u muuqataa inay tahay ikhtiyaar ka wanaagsan tan iyo qiimuhu wuxuu la mid yahay 4760 laakiin waa wax badan oo la taaban karo oo sahlan in la isticmaalo iyada oo ay ku mahadsan tahay shaashaddeeda. Guud ahaan, dhammaan way ka wanaagsan tahay.
Waxaan sidoo kale rumeysanahay in Alfa 4760 uu yahay nooc la joojiyay, soo-saaruhu kuma sii bixiyo liiska moodooyinka, marka marka la eego qaybaha firaaqada ama dammaanadda, waxay ku siin kartaa dhibaatooyin iibsashada moodal hore u lumay.
Oktoobar 21, 2019 markay tahay 12:08 pm
Aad baad u mahadsantahay, haddii ay muhiim tahay in la ogaado in 4760 aan lagu bixin liiska moodeelka rasmiga ah. Waxaan u maleynayaa inaan go'aan ka gaari doono Zart01. salaan.
Noofambar 5, 2019 saacaddu markay ahayd 10:57 pm
Hello! Waxay ii soo bandhigaan mashiinka alfa 618 ee € 190, ma ii sheegi kartaa haddii ay u qalanto qiimaha iyo sifooyinka mashiinka, mise way fiicnaan lahayd in aan soo iibsado mid casri ah, waan raadiyay waanan kari karaa' Ha helin wax sawiro ah. Aad baad u mahadsantahay.
Juun 18, 2020 markay ahayd 10:57 pm
Fiid wanaagsan Nacho, waxaan jeclaan lahaa inaad ii sheegto mashiinka aan iibsan karo, practic 9 ama 474, labadaba alfa, aad baad u mahadsantahay waxaana sugayaa jawaabtaada.
Ogast 30, 2020 at 12:27 am
Salaan: Waan ka mahadcelin lahaa haddii aad ii sheegi lahayd farqiga u dhexeeya awoodda iyo waxqabadka u dhexeeya Alfa Smart iyo Smart plus. Waxaan arkay in farqi weyn u jiro qiimaha. Ilaa €300. Kala duwanaanshiyahani waa mid xaq ah. Software-ka Smart-ka sidoo kale ma loo cusboonaysiin karaa si la mid ah Smart Plus? Aad baad ugu mahadsantahay jawaabtaada.
Ogosto 30, 2020 markay tahay 2:52 pm
Waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado mashiinka dharka; ka yar sidii caadiga ahayd, kaas oo lahaa ugu yaraan dhawr xaaladood, si fiican ayaan u daboolay, beddelmay gooyn, kaligay dunta, badhan daloolka hal mar oo ahaa mid aad u yar.
Ma garanayo inaad i caawin karto oo aad caddayn karto.
Ogast 31, 2020 at 9:54 am
Alfa 720 Basic waa ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay waxaad rabto, sidoo kale waa mashiinka tolida oo jaban.
Sebtember 12, 2020 at 12:28 pm
Subax wanaagsan, magacaygu waa María José, waxaanan leeyahay alfa laga dhaxlo hooyaday. Dhibaatadu waxay tahay in aanan garaneynin nooca alfa uu yahay, sidaas darteed, ma awoodi karo naftayda inaan hagi karo markaan raadinayo tilmaamo ama tilmaamo ku saabsan sida loo nadiifiyo, sida loo beddelo guluubka, sida loo dhigo saliidda. Kuma dhicin inaan kala furfuro si aan farta ugu fiiqo Mahad badan!
Diseembar 8, 2020 at 9:45 am
Ma hubtaa inaadan wax aqoonsi ah ku haysan xagga hoose ee mashiinka tolista Alpha?
Diisambar 15, 2020 markay ahayd 2:37 pm
Hooyaday waxaan rabaa inaan mishiin siiyo, waxay qabataa hawlo ay ka mid yihiin cidhifyada, siibadaha aan la arki karin ee jiinis ah, badhamada, rogroga, surwaalka, samaynta shaadhka ama goonnada, waxaan eegayay fannaanka moodada ee 3342, miyay noqon lahayd wanaagsanow mise waxaad ku talinaysaa nooc kale? Mahadsanid
Janaayo 16, 2021 markay ahayd 10:06 pm
Waad salaaman tahay Nacho.
Tan iyo 2009 waxaan haystaa alfa 1338. Waxaan rabaa inaan bedelo. Waxaan doorbidayaa makaanik Waxaan shaki ka qabaa inta u dhaxaysa alfa 674 iyo 474. Waxaan shaki ka qabaa, 674 model ma la socdaa mise miiska la dheerayn karaa la waafajin karaa? Mahadsanid.